Paracetamol (ပါရာစီတမော) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Paracetamol (ပါရာစီတမော)
Generic Name: Paracetamol (ပါရာစီတမော) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Paracetamol (ပါရာစီတမော)ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Paracetamol (ပါရာစီတမော) ကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနှင့် အဖျားပျောက်ဆေးအနေနှင့် အသုံးပြုကြသည်။ ထို့ပြင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကျောနာခြင်း၊သွားကိုက်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်း နှင့် အဖျားပျောက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုကြသည်။
အထက်ပါဖော်ပြထားသော ရောဂါများအပြင် တခြားသောရောဂါများတွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်။
ကုန်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပါဝင်သော ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။
Paracetamol ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Paracetamol ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Paracetamol ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Paracetamol ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Paracetamol ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Paracetamol (ပါရာစီတမော)အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Paracetamol (ပါရာစီတမော)
Paracetamol (ပါရာစီတမော)ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွေ့ရလေ့မရှိပါ။ ဆိုးကျိုးလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရပါမည်။
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဓါတ်မတည့်မှုများမတွေ့ရတတ်ပါ။ တွေ့ရလေ့ရှိသော လက္ခဏာများမှာ-
ဆီးနောက်ခြင်း နှင့် ဆီးတွင်သွေးပါခြင်း
ကျောပြင် နှင့် ခါးနာခြင်း (ဆိုးဆိုးရွားရွား ပြင်းထန်စွာနာတတ်သည်။)
အနာပေါက်ခြင်းနှင့် ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းများတွင် အဖြူဖတ်များဖြစ်ခြင်း
အလိုအလျောက်သွေးထွက်ခြင်း နှင့် သွေးခြည်ဥခြင်း
အသား နှင့် မျက်လုံးဝါခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Paracetamol (ပါရာစီတမော)နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Paracetamol သည် မိမိယခုလက်ရှိသောက်သုံးနေသောဆေးဝါးများ၏ အာနိသင်များပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
သွေးရည်ကြည်တွင်းရှိ အတက်ကျဆေးများ (phenytoin၊ barbiturate၊ carbamazepine)၏ အာနိသင်များ လျော့ကျစေပါသည်။
Warfarin သွေးကျဲဆေး၏ အစွမ်းသတ္တိများ တိုးပွားစေပါသည်။
Domperideone၊ metoclopramide အအန်ပျောက်ဆေးများ၏ စုပ်ယူမှုအားပိုကောင်းစေပါသည်။
သွေးရည်ကြည်တွင်းရှိ ပိုးသတ်ဆေးများ chloramphenicol ၊ probenecid ၏ ပမာဏမြင့်တက်စေနိုင်ပါသည်။
Cholestyramine သည်းခြေဆေးများ၏စုပ်ယူမှုအားကို ကျဆင်းစေပါသည်။
Phenothiazine စိတ်ရောဂါဆေးများသောက်နေလျှင် ဆိုးရွားစွာ ခန္တာကိုယ်တွင်း အပူချိန်ကျဆင်းခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်နိုင်ရန် သင် အသုံးပြုနေသော ဆေးဝါးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသောဆေး၊ ကိုယ့်ဘာသာဆေးဆိုင်က ဝယ်သောက်နေသော ဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး) စာရင်းများကို ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အား ပြပါ။ စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်မညွှန်ကြားဘဲ ဆေးသောက်ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ဆေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများကို မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Paracetamol (ပါရာစီတမော)နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Paracetamol က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းကိုပို၍အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါသည်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Paracetamol (ပါရာစီတမော)နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Paracetamol ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Paracetamol (ပါရာစီတမော)ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ချက်ချင်းအာနိသင်ပြသောဆေး- 325mg မှ 1g ထိကို ၄ နာရီခြား (သို့) ၆ နာရီခြားတစ်ကြိမ် သောက်သုံး နိုင်ပါသည်။
တစ်ခါတည်းသောက်မည်ဆိုပါက အမြင့်ဆုံး 1000mg ထိ သောက်နိုင်ပါသည်။ ၂၄နာရီအတွင်းအများဆုံး သောက် နိုင်သော ပမာဏ မှာ 4g ဖြစ်ပါသည်။
တဖြည်းဖြည်းချင်းအာနိသင်ပြသောဆေး – ၈နာရီခြားတစ်ခါ 1300mg ထိသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏမှာ ၂၄နာရီအတွင်း 3900mg ဖြစ်ပါသည်။
စအိုထဲထည့်၍ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ၄နာရီ-၆နာရီခြားတစ်ခါ 650mgထိ သုံးနိုင်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်သောပမာဏမှာ ၂၄နာရီအတွင်း 3900mg ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Paracetamol (ပါရာစီတမော)ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဖျားနာခြင်းနှင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများ အတွက်ပုံမှန်အသုံးပြုရသော ပမာဏမှာ
၁၂နှစ်အောက်ကလေးဆိုလျှင် ကိုယ်အလေးချိန် 1kg ကို ဆေး 10-15mg ၄နာရီ-၆နာရီခြားတစ်ခါ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ အများဆုံးသောက်သုံးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၂၄နာရီအတွင်း ဖော်ပြထားသောပမာဏ 5ကြိမ်ဖြစ်ပါသည်။
အသက် ၃လအထိ (ခန္ဒါကိုယ်အလေးချိန် 2.4-5.3kg) ထိ
အစက်ချဆေးအနေနှင့် 1.25ml သုံးနိုင်ပါသည်။
အသက် ၄လမှ၁၁လအထိ (ခန္ဒါကိုယ်အလေးချိန် 5.4-8.1kg) ထိ
အစက်ချဆေးအနေနှင့် 2.5ml သုံးနိုင်ပါသည်။
အသက် ၁၂လမှ၂၃လအထိ (ခန္ဒါကိုယ်အလေးချိန် 8.2-10.8) ထိ
အစက်ချဆေးအနေနှင့် 3.75 ml သုံးနိုင်ပါသည်။
ဝါးစား၍ရသောပုံစံမျိုး ကို 1.5သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
အသက် ၂နှစ်မှ၃နှစ်အထိ (ခန္ဒါကိုယ်အလေးချိန် 10.9-16.3mg) ထိ
အစက်ချဆေးအနေနှင့် 5ml သုံးနိုင်ပါသည်။
ဝါးစား၍ရသောပုံစံမျိုး ကို 80mg 2ပြား သို့မဟုတ် 160mg ၁ပြားသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
အသက် ၄နှစ်မှ၅နှစ်အထိ (ခန္ဒါကိုယ်အလေးချိန် 16.4-21.7kg) ထိ
အစက်ချဆေးအနေနှင့် 7.5ml သုံးနိုင်ပါသည်။
ဝါးစား၍ရသောပုံစံမျိုး ကို 80mg 3ပြား သို့မဟုတ် 160mg ၁ပြားခွဲသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
အသက်၆နှစ်မှ၁၂နှစ်ထိ 325mg ကို ၄နာရီ-၆နာရီခြားတစ်ခါသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက် မရှိဘဲ တစ်နေ့ အများဆုံး 1.625g ထက်မပိုရ ။ ၅ ရက်ဆက်တိုက် မသောက်သုံးရပါ။
ပုံမှန်သောက်သုံးလေ့ရှိသော ပမာဏမှာ ၄နာရီ-၆နာရီခြားတစ်ခါ 650mg သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ၂၄နာရီအတွင်း 3.25g ထက်မပိုရပါ။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုနှင့် တစ်နေ့ကို 4g ထိသောက်နိုင်ပါသည်။
ပမာဏအများနှင့်သုံးရသောရောဂါများတွင် ၆နာရီခြားတစ်ခါ 1000mg သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ၂၄နာရီအတွင်း 3g ထက်မပိုရပါ။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှုနှင့် တစ်နေ့ကို 4g ထိသောက်နိုင်ပါသည်။
တိုးချဲ့ပမာဏ နှင့် သောက်သုံးမည်ဆိုပါက တစ်နာရီကို 1.3g သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ၂၄နာရီအတွင်း 3.9g ထက်မပိုရပါ။
Paracetamol ကို 325 mg-30 mg၊ 325 mg-60 mg၊ 120 mg-12 mg/5 ml၊ 300 mg-15 mg၊ 300 mg-30 mg၊ 300 mg-60 mg၊ 650 mg-30 mg၊ 650 mg-60 mg ပမာဏနှင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးလုံး (ဝါးစား၍ရသော ၊ ရေဆူဆေးပြား)
Paracetamol ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Paracetamol. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-57595/paracetamol- oral/details. Accessed September 8,2016.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတ် 23, 2018